November 16, 2021 - Babal Khabar
Nov162021 by बबाल खबरNo Comments
हेर्नुस यो भिडियो, काठमाडौं। परीक्षामा पास हुनका लागि विद्यार्थीहरुले अनेक उपाय अपनाउँछन् । परीक्षा पास गर्नको लागि घोटिएर पढ्ने विद्यार्थी धेरै छन् त्यसबाहेक कसैले परीक्षा हलमै चिट लिएर जान्छन् र उत्तर चोर्छन् । केहीले भने परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामै उत्तर पुस्तिका जाँच्ने शिक्षकलाई पत्र समेत लेख्छन् । यस्तै अनौठो घटना सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा हलमा आएपछि कुनै उपाय नलागेपछि यी छात्राले यतिसम्म आश्चर्यजनक काम गरेकी छिन । यी छात्राले आफ्नो लागि त निकै राम्रो उत्तर लेखिन होला तर के कोही नयाँ गीत लेख्दैमा पास होला र ? यी छात्राले सुरुदेखि अन्तिमसम्म केवल बलिउडका गीत लेखेकी छिन् । उत्तर पुस्तिकाको अन्त्यमा भने यी छात्राले आफ्नो गरिबीको हवाला दिँदै पास गराइदिन गुहारसमेत मागिन । यो कपी परीक्षण गर्ने शिक्षकले यी छात्राको गुहार त मानेनन् बरु यो कापी नै परीक्षा अधिका
एजेन्सी । महिला र पुरुष एकअर्काप्रति आकर्षित हुने प्राकृतिक नियम नै हो । जीव विज्ञानअनुसार महिला र पुरुषको मस्तिष्कमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षक गर्ने गुणहरु हुन्छन् त्यसैले गर्दा बिपरित लिं’गीप्रति अाकर्षण हुन्छ ।तसर्थ किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै एकअर्काप्रति आकर्षित हुने सामान्य मान्नुपर्छ । पुरुष र महिलाको प्राथमिकता भने फरक हुन्छ । पुरुष र महिलाका लागि यौ का आकर्षण फरक फरक अं गमा हुने अध्ययनले देखाएको छ । पुरुषले महिलाको अनुहार, वक्षस्थल, नाइटो, कम्मर, आँखा, ओठ, हिप लगायतका ७ अं ग बढी मन पार्छन् भने महिलाले पुरुषको सर्लक्क परेको पेट, चौडा छाती, पाखुरा, ओठ र आँखा मन पार्छन् । महिलालाई पुरुषको व्यक्तित्वले आकर्षित गर्छ भने पुरुषले बाहिरी राम्रोलाई बढी ध्यान दिन्छन् । तर आकर्षित गर्ने कुरा हरेक व्यक्तिको रुची र चाहनामा केहि फरक हुनसक्छ । साभार गरियको खबर । यो पनि पढनुस , पर्यट
हेर्नुस भिडियो, छतबाट अनौठो आवाज आइरहन्थ्यो। ६ महिनादेखि यस्तो चलिरहेको थियो ।दिन यसको जाँच गर्दा यस्तो वास्तवि कता खुल्यो कि खुट्टामुनिबाट जमिन नै भासियो। घटना अमेरिकाको जर्जियाको हो। यहाँकी लीजा नाम गरेकी एक महिलाको घरबाट यस्तो चीज निस्कियो जसलाई देखेर जो कोही चकित परे। लिजाले जब पहिलो पटक यो घरमा आउँदा यो आवाज सुनिन् उनले वास्ता गरिनन्। उनले सोचिन् यो बाहिरको आवाज होला। तर आवाज बन्द भएन । हेर्दा हेर्दै ६ महिना बिते। लिजाले लगातार आवाज आइरहेपछि यो के रहेछ भनेर जान्ने चेष्टा गरिन्। उनले सहयोगको लागि विशेषज्ञ बोलाइन्।जब एक्सपर्टले घरको निरीक्षण गरे तब थाहा भयो घरको सिलिङमा एक लाखभन्दा धेरै माहुरीले डेरा जमाएर बसेका थिए। यस क्रममा उनीहरुले छतमा झण्डै २७ किलो मह जम्मा गरेका थिए। विशेषज्ञले धुवाँको सहयोगले माहुरी उडाए र छतमा बनेको प्लाइउडको खाली ठाउँलाई पूरै बन्द गरिदिए ताकि यहाँ
भिडियो , पर्यटन प्रवर्द्धनका अनेक तरिका हुँदा रहेछन् । एउटा गाउँ गाउँले महिलाहरुको लामो कपालका कारण पर्यटनको केन्द्र बनेको छ र त्यहाँ हरेक वर्ष झण्डै ८० हजार पर्यटक महिलाको लामो कपाल हेर्नकै लागि आउँछन् ।खबर हो चीनको । गुआंग्झी प्रान्तस्थित हुआन्गुलो गाउँ लामो कपाल भएका महिलाहरुको गाउँ हो । उक्त गाउँका ८० जना महिला यस्ता छन् जसको कपालको लम्बाई १.४ मिटर देखि २.२ मिटरसम्म छ । महिलाहरुको लामो कपालकै कारण यो गाउँ दुनियामा चर्चित छ । महिलाको कपाल हेर्नकै लागि वर्षेनी ८० हजार पर्यटक उक्त गाउँमा पुग्ने गरेका छन् । यी महिलाहरुलाई रेड याओ पनि भनिन्छ । महिलाहरु प्रायः रातो रङको कपडा लगाउँछन् । आफ्नो लामो कपाललाई लिएर महिलाहरु निकै गौरवान्वित हुन्छन् ।यो गाउँ दुनियाको सबैभन्दा लामो कपाल भएका महिला भएको गाउँ पनि हो र यसले गिनिज बुकमा आफ्नो नाम दर्ज गराइसकेको छ ।रोचक कुरा त के भने यो गाउँमा
भिडियो, दैनिक दुईटा ओखर खानाले शरिरलाई मिल्छ यति धेरै फाइदा, जानकारीका लागि पढेर सेयर गर्नुहाेला । ‘ब्रेन फु-ड’ अर्थात ओखरको सेवनले मस्तिष्कको विकाससहित यसलाई स्वस्थ्य राख्न सघाउ पुर्याउँछ । ओखरमा पाइने प्रचुर मात्राको पोषक तत्वले छाला र कपालसमेत मुलायम एवम् चम्किलो बनाउँछ । ओखरमा भरपुर मात्रामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड हुन्छ साथै यसमा भिटामिन ए, बि६, बि१२, सि, डि, इ र के पाइन्छ । यो प्रोटिनको पनि राम्रो स्रोत हो । यसका साथै क्याल्सियम, मिनरल्स, म्यानेसियम, आइरन, फस्फोरस, जिंक, कपर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा सोडियम कम र कालोस्टर पटक्कै हुँदैन । यो एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो । ओखर खानुका फाइदाहरु:- १. मनतातो पानीसँग ओखर सेवन गर्दा जोर्नीको दु-खाई ठीक हुन्छ । २. ओमेगा तीन फ्याटी ए`सिड मुटुलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि सहयोग गर्दछ । ३.ओखरलाई हल्का भुटेर महसँग सेवन गर्नुपर्छ, खोकी
भिडियो, दिउँसो सुत्ने बानी लागेकाे छ भने होस पुर्याउनु हाेला नत्र शरिरमा लाग्न सक्छ यस्ता ख´तराक राे'गहरु ! धेरै मानिसहरुलाई दिउसाे सुत्ने बानि हुने गरेकाे छ अजकलकाे समयमा ! अझ भनाैँ काे-राेना सुुरु भएपछि लडका'उनकाे कारण अझ मानिसहरुलाई दिउसाे सुत्ने बानि धेरै बसेकाे छ तर दिउसाे सुत्नु राम्रो हुदैन दिउँसो सुत्ने बानीले यस्तो हुन सक्छ:- १) ब्लडसुग'रको स्तर असामान्य:- दिनभरि सुत्दा रातमा निद्रा लाग्दैन । रातमा निद्रा पूरा नहुँदा भोक धेरै लाग्छ र यसले ब्लडसुगरको स्तर असामान्य गराइदिन्छ । डाय'बि'टिज वा मो'टोपनका कारण लिभर क्या'न्सरको ख-तरा रहन्छ । डायबिटिज टाइप टु रोगीको अत्यधिक तौल लिभर क्यान्सरका कारण बन्न सक्छ । सामान्यतः महिलाको कम्मरको मोटाइ ३० र पुरुषको ३४ इन्चभन्दा माथि हुनुहुँदैन । अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीको एक अध्ययनले कम्मरको मोटाइ आवश्यकभन्दा ५ सेन्टिमिटर बढे पनि क्यान
उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, राता रात बन्नुहुनेछ धनी !
पहिले यो भिडियो हेर्नुस, काठमाडौँ । धनी बन्न को चाहदैँन ? सबै मानिस सुखमय जीवन व्यतित गर्न चाहान्छन् । त्यसैले त दिनरात नभनी काममा लागिरहेका पनि हुन्छन् ।यदि तपाई पनि रातारात धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने बिहानै बिस्ताराबाट नउठ्दै यस्ता काम गर्नुपर्छ । व्यवहारिक अर्थशास्त्रका पिता रिचर्ड थेलरले नोबेल पुरस्कार जितेपछि भनेका थिए, धनी जो कोही पनि बन्न चाहन्छ, त्यसैले धनी बन्नका लागि सही दिशा तय गर्नुपर्छ ।एउटा कथन छ कि बिहान जस्तो हुन्छ दिन पनि त्यसैरी नै बित्छ । अर्थात् बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । केही काम भने बिहान गरेमा सुख समृद्धि आउँछ । बिहान उठेपछि स्नान गनुपर्छ । धार्मिक पुराणमा दिनको शुरुवात स्नानबाट हुनुपर्ने बताइएको छ ।यसले दिनभरको उर्जा सञ्चय हुन्छ । स्नानपछि तत्काल नै भगवानको नाममा दियो बाल्दा पनि समृद्धि आउँछ ।पूजापाठ, भगवानको नामको जप गरेमा सुखसमृद्धि साथमा हुन्छ । यो ख
हेर्नुस यो भिडियो, याै’/न क्ष-मता बढाउने चा-हाना सबैलाइ हुन्छ । तरपनि हामिले यस बिषयमा ध्यान दिएका हुदैनाै । अाज हामिले केहि घरेलु उपाय बारे जानकारी दिदैछाै । खरबुजा:खरबुजामा सिटुलाइन नाम गरेको एमिनो ए’/सिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले यौ’/नां/गमा र-क्तस/ञ्चार ती व्र पार्छ । यौ’नां-गमा र-क्तसञ्चार ती व्र पार्नकै लागेर भि’या-ग्रा लिने गरिन्छ । जुन काम खरबुजा खाएर पनि गर्न सकिन्छ । अदुवा:अदुवा खानाले यौ-‘ नां-गसहित श रीरका सबै भागमा /रक्तसञ्चार ती व्र हुन्छ । से/’क्सअघि अदुवा हालेको चिया खाने गरेमा शरीर तात्छ, मुटुको ध ड्कन र र/क्तस ञ्चार तीव्र हुन्छन् ।एभोकाडो:एभोकाडोमा भिटामिन बी–६ र पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । भिटामिन बी–६ ले पुरुषमा से/’ क्स हा/’र्मोन बढाउने गर्छ । पोटासियमले महिलाको थाइ रा’इड ग्रन्थिलाई स्वस्थ राख्छ । थाइ’राइड ग्र/न्थिको स म्ब न्ध व्यक्तिको यौ/’न क्